Devanagari News‘नागरिकता अध्योदश रोक्ने आदेश पक्षपातपूर्ण छ’ — Devanagari News
जसपा ठाकुर पक्षका नेता डा. सुरेन्द्र झा सर्वोच्चको आन्तरिम आदेश पक्षपातपूर्ण भएको बताउँछन् । कतै यो आदेश सेटिङमा भएको होइन भन्ने संशय पैदा भएको भन्दै उनले भने, अपेक्षा गरौं, यो सेटिङ नहोस् ।’ प्रस्तुत छ, जसपा नेता झासँग अनलाइनखबरकर्मी रघुनाथ बजगाईंले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
संवैधानिक परिषद सम्बन्धी लगायतका जति पनि अध्यादेशहरू छन् त्यसमा कहीं न कहीं संविधानको धारा, उपधाराको मर्मलाई आघात पुर्‍याउने गरी विषयहरू उल्लेख गरिएको छ । संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशमा टेकेर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमै जुन नियुक्तिहरू भएको छ, अन्य नियुक्तिहरू जुन छ त्यो नियुक्तिहरू भोलि अध्यादेश ऐनको रूपमा, कानूनको रूपमा संसदबाट पारित भएन भने के हुन्छ ? त्यहाँ समस्या हुन सक्छ । यत्रो नियुक्तिहरू गरेको छ ।
बुझ्नुपर्ने कुरा– जस्तोसुकै प्रकृतिको अध्यादेशको आयु ६ महीना हो । र संसद चलेको अवस्थामा ६० दिनभित्र त्यो अध्यादेश अनुमोदन गर्नुपर्‍यो या त्यसको ठाउँमा अरू कानून बनेर आयो भने स्वतः खारेज हुन्छ ।
तपाईंले भने जस्तै सरकारले नागरिकता भन्दा अगाडि अरू धेरै अध्यादेशहरू ल्याएको छ । ती अध्यादेश विरुद्ध समेत सर्वोच्चमा रिट परेको छ । स्वयं सभामुख सर्वोच्चमा गएका छन् । ती रिटहरू प्राथमिकतामा परेनन् तर, नागरिकता अध्यादेश पर्‍यो । यसमा सेटिङ भएको त होइन ?
नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश संविधानमा जे छ हुबहु ल्याएको छ । यो रोक्नु अचम्म लागेको छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । त्यसकारण सम्बन्ध चिसिएको छ । सरकार र हाम्रो बीचमा, प्रधानमन्त्री र हाम्रो पार्टीका बीचमा सम्बन्ध चिसिन्छ । न्यायालयसँग त्यो अपेक्षा भएन । तपाईंले भने जस्तो सेटिङ छ भने, सेटिङ हुने हो भने हाम्रो यो काम हुनुपर्‍यो, निष्ठाका साथ प्रधानमन्त्रीले यो कुरालाई निरुपण गर्न सक्नुपर्दथ्यो ।
नक्कली बाबु छोरी बनी नागरिकता लिने दुईजना पक्राउ
कीर्ते कागजात पेश गरी नागरिकता बनाउन खोज्ने ज्वाइँ-ससुरा पक्राउ
नागरिकता अध्यादेश ल्याउनु सरकारको बदनियत : राप्रपा